विचार नगरी विश्वास गर्दा कसरी आफैलाइ समस्या आइपर्छ ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
हामीले सधै जीवनका हरेक कदम हाेसियारपुर्वक चाल्ने गर्नुपर्दछ । किनकि यहाँ तपाइकाे खुट्टा कतिबेला कुन माेडका गएर चिप्लिन्छ र तपाइलाइ पछारूम भनेर बस्नेहरूकाे कमि नै छैन । एउटा कुरा सधै याद राख्नुहाला । यदि तपाइ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भने कहिल्यै पनि कसैकाे साहारा लिने नगर्नुहाेला । यहा विश्वास गर्न लायककाे काेहि छ भने, त्याे तपाइ अाफै हाे ।
जीवनमा प्रेरणादायीक कुराहरूकाे धेरै नै अावश्यक पर्ने हुन्छ । यदि तपाइ दुखि भएर बस्नु भएकाे छ भने एकान्तमा गएर मिठाे धुन सुन्ने गर्नुहाेस । यसले तपाइकाे दुखिपनलाइ हटाउन एकदमै मद्दत गर्दछ । याे संसारमा सच्चा हितैसि एकदमै कम छन् । त्यसैले अघि बढ्नुहाेस र याे संसारलाइ सफल भएर देखाउने हिम्मत राख्नुहाेस । जुनबेला तपाइ सफल बन्नुहुनेछ त्यसबेला याे दुनिया पनि तपाइकाे साथमा पाउनुहुनेछ । किनकि याे दुनिया असफल मानिसलाइ भन्दा बढि सफल मानिसलाइ साथ दिने गर्दछ ।
अाज हामीले यहाँ जीवन उपयाेगी एक कथा लिएर अाएका छाै । याे भिडियाेमा विचार नगरी विश्वास गर्दा कसरी आफैलाइ समस्या आइपर्छ ? भन्नेबारे रहेकाे छ । याे भिडियाे युट्युब च्यानल SAKARATMAK SOCH बाट साभार गरेका छाै ।
Don't Miss it बच्चाको उचाइ बढाउने सजिलो तरिकाहरू यस्ता छन्, जान्नुहाेस्
Up Next यस्ता खराब बानिका कारण किड्नी फेल हुनसक्छन् जानिराखाै